Muri pano: musha / Technology News / famba / Realme 9 Pro Plus yakaonekwa pane IMEI dhatabhesi; inogona kutanga pamwe chete neRealme 9, Realme 9 Pro
Realme 9 Pro Plus yakaonekwa pane IMEI dhatabhesi.
Iyo smartphone inogona kuvhurwa pamwe chete neiyo Realme 9 uye Realme 9 Pro.
Realme 9 yakatevedzana yakarongerwa kutanga kutanga kwa2022.
Neiyo Realme 9 yakateedzana yakasimbiswa kutanga muna 2022, mafoni ari kuuya eakamirirwa zvakanyanya akapedzisira atanga kurova mamwe mawebhusaiti ekupa data. Zvino, maererano netipster Mukul Sharma, iyo Realme 9 Pro Plus yakaonekwawo pane IMEI dhatabhesi. Nhamba yemhando yemudziyo iri kuuya ichave RMX3393 uye inogona kunge iine akawanda ekupedzisira-ekupedzisira zvichienzaniswa neiyo Realme 9 uye Realme 9 Pro. Realme 9 Pro Plus mutengo uye zvinhu zvehardware zvinoramba zviri chakavanzika parizvino, asi zvinoita sekunge foni iripo.
Realme 9 Pro Plus inoshanyira iyo IMEI dhatabhesi.#Chaiyo # Realme9ProPlus pic.twitter.com/XRpwoUP9VG
- Mukul Sharma (@stufflistings) October 23, 2021
Realme 9 akateedzera runyerekupe zvakatemwa
Realme mwedzi wapfuura yakazivisa kuti yavo inouya yakaverengeka aka Relame 9 nhevedzano ichavhura muna 2022, netarisiro yekuvhurwa kweQ1 2022. Midziyo iri kuuya inofanirwa kunge iine mamwe-akagadziridzwa specs pamusoro peiyo Realme 8 uye Realme 8 Pro. Zvinoenderana nekudonha kwazvino, iyo Realme 9 Pro kana Pro Plus inogona kunge iine Qualcomm Snapdragon 870 chipset mukati ine yakakwira yekuzorodza mwero AMOLED kuratidza. Iyo yakatangira Realme 8 Pro yakauya iine 108MP yekutanga kamera kutyora zvipingamupinyi, uye isu taigona kuona budiriro yakafanana neRealme 9 Pro kana Realme 9 Pro Plus zvakare.
Iyo vanilla Realme 9 inogonawo kuuya neakawanda ekusimudzira specs, iyo Realme 9 pakupedzisira ichiwana yakakwidziridzwa processor pamusoro peMediatek Helio G90, G95 iyo Realme yanga ichishandisa pavari mukati megore nehafu rapfuura. Iyo modhi inogona zvakare kuuya ne5G moniker sezvazvaive zvakaita nekuvhurwa kweRealme 8 5G.
Panyaya yemitengo iri kuuya Realme 9 inogona kutengwa pazasi pegumi neshanu mutengo bracket yeiyo base musiyano, neiyo Realme 15,000 Pro inotarisirwa kuvhura pazasi zviuru makumi maviri kune iyo base musiyano. Neiyo itsva Realme 9 Pro Plus zvakare yakasimbiswa kuti itange padivi pavo, zvingave zvinonakidza kuona kuti Realme inodhura sei iyo smartphone muchikamu chayo chine nhamba.
The post Realme 9 Pro Plus yakaonekwa pane IMEI dhatabhesi; inogona kutanga pamwe chete neRealme 9, Realme 9 Pro akatanga kuoneka pa 91mira.ru.
Ongorora: Iyo Realme X7 5G iri yepakati-renhare foni ine yakamira kukosha